Indlu engaphambili yeSamet Beach enedama lokuqubha - I-Airbnb
Indlu engaphambili yeSamet Beach enedama lokuqubha
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguPhilippe
Indlu entle engaselunxwemeni elunxwemeni lwase-Thai ejongene ne-Koh Samet emangalisayo kunye neziqithi zase-Koh Kam nje iiyure ezimbini ezinesiqingatha zokuhamba ukusuka e-Bangkok Suvarnabhumi Airport (Bangkok) kunye ne-1 iyure yokuhamba ukusuka e-Utapao Airport (Pattaya).
3 amagumbi okulala atofotofo anamagumbi okuhlambela + ibhedi enye yesofa kakumkanikazi kunye nebhedi yomntwana enye, kunye ne-air-conditioning. Ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye ne-BBQ yangaphandle. Iqula elikhulu lokuqubha elinejacuzzi kunye nendawo yabantwana, inkundla yentenetya, unogada 24/7 nokunye okuninzi.
Indlu ilungile kunxweme oluhle olujongene neziqithi zaseKoh Samet kunye neziqithi zaseKoh kam. Ifakwe kakuhle ngazo zonke izinto eziluncedo, izixhobo kunye neenkonzo zokuphumla ngokwenene kunye neeholide ezimnandi.
IiNdwendwe zethu zingonwabela imisebenzi yendlu engaselunxwemeni kunye nohambo lwesikhephe ukuya kwiziQithi ezikufutshane ezimangalisayo, ezifana neKoh Samet Koh Kram, Koh Thalu,... Windsurf kunye neKite surf nazo ziyafumaneka xa uceliwe. Kungenjalo, jonga iipaki zeSizwe ezibukekayo, iingxangxasi ezintle kunye nemiqolomba yelimestone kwiPhondo laseRayong okanye uzibandakanye ngokutya kwaselwandle okusandula ukubanjiswa ukusuka kwiilali ezikufutshane zokuloba.
Uhambo lwesikhephe ( lunconywa kakhulu ) :
Isikhephe siya kuza kukuthatha elunxwemeni phambi kwendlu.
Ukutyelela isiqithi esincinci phambi kwendlu. Koh Kam , Koh Kruai & Koh Klet Chalam. ukuntywila emanzini kwaye wonwabele ubuhle bonxweme . Emva kolo tyelelo lukaKho Samet.
Ixabiso labantu abasi-8 ubuninzi kwaye imini yonke = 7500 THB
I-Koh Man Nai, indawo yofudo lwaselwandle ephantsi kolawulo lwasebukhosini evulekele utyelelo lwemini kunye ne-Koh Talu. Uhambo lwemini ukusuka ngo-09:30 AM ukuya ku-16:30 PM
I-Koh Thalu kunye ne- Koh Kudi, iziqithi ezicocekileyo ezineebhedi zekorale kunye neentlanzi eziziintlanzi ezidume ngokuntywila emanzini eziyinxalenye ye-Khao Lem Ya-Koh Samet National Park.
Ixabiso labantu abasi-8 abaphezulu imini yonke = 8, 500 THB
I-Rayong Aquarium: kwi-Ban Phe. Vula 10 a.m.-16:00 Wed.-Fri, 10 a.m.-5 p.m. NgoMgqibelo, Langa. kunye neeholide zikawonke-wonke. Kuvaliwe ngoMvulo, ngoLwesibini.
I-Khao Chamao-Khao Wong National Park Landela umzila onomthunzi okhokelela ekujongeni iindawo ezidlula kwiingxangxasi ezisi-7 ezisetwe kumahlathi ashinyeneyo ashinyeneyo esebenzisana nezilwanyana emva koko undwendwele imiqolomba yekalika yaseKhao (Mount) Wong. Ukuba unethamsanqa, unokubona ibhokhwe yasezintabeni. Izihlangu zokuhamba ziyacetyiswa kodwa akuyomfuneko.
Intengiso ye-Ban Phe yemisebenzi yezandla, izikhumbuzo, impahla, ukutya kwaselwandle okomisiweyo kunye neziqhamo, amashwamshwam esintu; Ukutya kwaselwandle okutsha kunye nemarike entsha ikwindlela emxinwa ekufutshane neSuphattra Land Fruit Garden Yonwabela ukhenketho lwetroli olukhokelweyo kule fama yeziqhamo yorhwebo ngoku-ngangoko-unako-ukutya iindawo zokumisa iminikelo yamaxesha onyaka.
Ukukhwela iHashe: Slo Bunny Horse Ranch, Ban Phe District Rayong; ukukhwabanisa okumnandi kwihlathi elikufutshane leziqhamo eziphilayo eligcwele amahashe amaninzi abhadulayo kunye neeponi
IKlabhu yokukhwela iHashe iChomview, iNikhom Phattana Districe Rayong: imikhondo yokukhwela; izifundo zabaqalayo ukuya kubakhweli abaphambili.
Izikhosi zeGalufa: Eastern Star Rayong Green Valley
Umncedisi wakho uya kukwamkela kwaye akunike izitshixo kananjalo akucacisele lonke ulwazi olusisiseko . Kwicala lam ndizakuba semdleni wakho ngoWhatsapp okanye ngoLine ukuze ndikudlulisele lonke ulwazi oluyimfuneko ukusukela ngo-09:00 AM ukuya ku-21:00 PM.
Umncedisi wakho uya kukwamkela kwaye akunike izitshixo kananjalo akucacisele lonke ulwazi olusisiseko . Kwicala lam ndizakuba semdleni wakho ngoWhatsapp okanye ngoLine ukuze ndikud…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- ตำบล กร่ำ